Maalinta: Meey 12, 2017
Kulanka Guddiga KIT waxaa lagu qabtay TCDD
Shirkii Gudiga Guddi hoosaadka SEE ayaa lagu qabtay TCDD: Maareeyaha Guud ee TCDD Apaydın wuxuu yiri: "Waxaan hada ku guda jirnaa dhismaha, qandaraaska iyo howlaha mashruuca khadka tareenka ee 9698 km." Xisaabaadka 2015 iyo akoonada Shirkadda iyo kaabayaasheeda [More ...]
Samaynta Saldhig Saadka ee loogu talagalay Afyonkarahisar ayaa dhammaaday: TCDD 2012 waxay ka shaqeyneysay aasaasidda Saldhigga Saadka ee Afyonkarahisar ilaa 7. Qoraal heshiis horudhac ah ayaa la saxeexay Agaasinka Gobolka. Maareynta OIZ [More ...]
Atiker Konyaspor Isticmaal Tareenka Xawaaraha Sare
Atiker Konyaspor wuxuu adeegsadaa Tareenka Xawaaraha Sare ee kulamada: Atiker Konyaspor wuxuu doorbiday Tareenka Xawaaraha Sare ee kulamada bannaanka xilli ciyaareedka oo dhan. Raaxo, dhakhso, amaan, safar raaxo leh oo suurtagal ah kordhinta baahida rakaabka [More ...]
TCDD ee Siddeed Dawladood
TCDD waayo, ku xereen sideed gobol Alert: Turkey State Tareennada (TCDD) General Directorate of Property, sida daawooyinka in la sameeyo ka yar line tareenka ee alaarmiga yaranta for siddeedii gobol. Republic of Turkey [More ...]
Sahanka isgaadhsiinta Iscehisar iyo hawlaha mashruuca ayaa bilaabmay
Sahanka khadka iscehisar Iscehisar iyo shaqada mashruuca ayaa bilaabmay: TCDD Afyonkarahisar 7. Agaasime Goboleed ayaa heshiis hordhac ah la saxeexay Isgoysyada Iscehisar OIZ waxaana loo ogolaaday meelaynta mashruuca saadka. Zonescehisar Aagga Wershadaha abaabulan [More ...]
6 September Express ayaa ku burburtay Akhisar
6 Sebtembar Express Akhisar'da ayaa isku dhacay gawaarida xamuulka: Manisa's Akhisar degmada Bandırma İzmir waxay booqatay 6 Sebtember waxay muujisay, isgoyska heerka inuu ku dhacay gaariga. Ma jiro qof ku dhintay ama ku dhaawacmay shilka. Akhriska Manisa [More ...]
Karşıyaka Duulimaadyada ayaa bilaabmay Tram
Karşıyaka Ka bilaabmay Tramway: Duullimaadyada pre-howlka leh rakaabku way sii socdaan Karşıyaka Farsamadii fashilantay ee subaxnimadii ka soo kaco tareenka dhulka la dhigtey waa la xaliyay. Duulimaadyada ayaa dib u bilaabay 14.45. Ka dib markii aad goysay khadka [More ...]
RayHaber 11.05.2017 Warbixinta Shirka
Cabirida Qalabka iibsiga
Helitaanka Mersin Port waxay sahlanaan doontaa khadka TCDD
Gaadiidka loo qaadayo Dekada Mersin waxay ku fududaan doontaa khadka isgoyska TCDD: Qaab dhismeedkayaga maareynta, kaasoo qaabeeya baahiyaha gobolka sababo la xiriira siyaasadaha dhaqdhaqaaqa, wuxuu dhameystirayaa maalgashiga saadka ee ay u baahan yihiin warshadleyda, iyo ku habooneynta qiimaha qoondeynta dhulkeena. [More ...]
Guddoomiyaha Gaadiidka-Sen Cankesen ee Sivas: Sarkaalka Gaadiidka-Guddoomiyaha Guddoomiyaha CanCankesen iyo saaxiibadiisa intii lagu jiray booqasho uu ku tagay Sivas TCDD, TUDEMSAS, Guddoomiye Goboleedka Gaadiidka, Guddoomiyaha Gobolka Ak Party oo booqday Waxbarashada One-Seni. [More ...]
TCDD 2018 Muddada 2. Qoraalka Taraafikada Isgaadhsiinta La daabacay
Muddada TCDD 2018 2. Ogeysiinta Shabakada Wadada Taleex La Sii Daayay: Tallaabo kale oo muhiim ah oo ku saabsan habka is-xoorinta ee qaybta Tareenka ayaa la qaaday oo ogeysiiska shabakadda labaad ayaa la daabacay maanta. Waxa diyaariyey TCDD; Shabakada kaabayaasha tareenka, shuruudaha marinka, [More ...]
Maanta taariikhda: 12 May: 4 July 1888 Hirsch oo leh boqortooyadii Ottoman te
Taariikh Maanta Maanta 12 May-4 July 1888 Wafdigii Ha-kem ayaa la qabtay si looga hadlo arimaha la isku haysto ee ka dhaxeeya Boqortooyada Ciraaq iyo Hirsch. Kulanku ma samayn go'aan.